Kukwira kweHuwandu hweVane Covid-19 Kwoita Kuti Hurumende Ikurudzirwe Kuvheneka Vanhu Vakawanda
Makambani pamwe nemabhazi anotakura veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vasimbise hurongwa hwekufirita pamwe nekugezesa nzvimbo dzekushandira kudzivirira Coronavirus
Bazi rezvehutano rakazivisa nemusi weChina kuti vanhu vanosvika zviuru zvitatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri, kana kuti 3 092, vakabatwa nechirwere charura pasi rose cheCovid-19, uye huwandu hwevanhu vafa hwakakwira kusvika pamakumi mashanu nevatatu, kana kuti 53.
Bazi iri rakazivisawo kuti huwandu hwevanhu vakanga vapora kusvika nezuro hwakanga hwave pavanhu mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevana, kana kuti 924.
Vanhu vanosvika mazana maviri negumi nevatatu kana kuti 213, vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zvitatu nezana nemakumi mapfumbamwe nemumwechete, kana kuti 3 191, vakavhenekwa kuona kana vaine chirwere ichi.
Dunhu reHarare ndiro riri pamusoro pahuwandu hwevanhu vane chirwere ichi, riine vanhu vanosvika chiuru nemakumi manomwe nevashanu, kana kuti 1 075, richiteverwa nedunhu reBulawayo, iro rine vanhu mazana masere nevashanu kana kuti 805 vabatwa nechirwere ichi kusvika nemusi weChina.
Makambani akawanda munyika anonzi ari kumbovhara zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vashandi vaine chirwere ichi.
Nemusi weChitatu, kambani yemabhazi yeZUPCO, iyo inove ndiyo chete ine mvumo yekutakura veruzhinji munguva ino yemutemo unorambidza kufamba famba kwevanhu, yakazivisa kuti vashandi vayo gumi vakanga vawanikwa vaine chirwere ichi mushure mekuvhenekwa nevashandi vebazi rezvehutano.
Izvi zvinonzi neimwe nyanzvi yezvehutano vari chiremba, Dr. Edgar Munatsi, hurumende inofanirwa kusimbisa hurongwa hwekutevera vese vakambosangana nevashandi ava pamwewo nevanho vose vari kuwanikwa vaine chirwere ichi, uyewo vose vanofamba nemabhazi eZUPCO vanofanirwa kuvhenekwawo kuti havana chirwere ichi here.
Dr. Munatsi vanoti hurumende inofanirwa kutarisisa zvakare hurongwa hwayo hwekuti ZUPCO ndiyo chete inofanirwa kunge ichitakura veruzhinji munyika, kuitira kuti ibvumidzewo vamwe vane dzimotokari dzavo kutakurawo vanhu.
Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana matatu kana kuti 17.3 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose, icho chaurayawo vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvitatu kana kuti 673,000 pasi rose.
Dr. Munatsi vanoti kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine chirwere cheCovid-19 pazuva hwave kuwanda, hurumende inofanirwa kutokwinya kuti iwedzere kuitira kuti irwisane nechirwere ichi.